sosegado : အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
မှားယွင်းပါစေ အခုနေတော့ ငါမပြုပြင်…ဟိုင်း….
အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ဆိုနိုင် သိပ်နက်ရှိုင်းတာပဲ ငါသိတယ်
အသည်းနှလုံးကနေပြီး အို… တိုက်ရိုက်ကြိုးကိုင် စေခိုင်းသလား
ငါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မကြုံဘူးသေးလို့ ရူးတာလား
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အားကြီးလွန်းတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုကြောင့်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခံစားမှုများဆွဲငင် အပြာရောင်စက်ကွင်းထဲ ဝင်ရောက်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုံဗိမာန်နဲ့ထောင်ချောက် ဘာဆိုဘာမှမသိ စွန့်စားချင်စိတ်တွေရှိပြီ
ကမ်းစပ်မမြင်ဘဲ အတူတူမျောချင်လွင့်ချင်မိတာ အချစ်ပဲလား၊
မိုးသားပင်လယ် အပြောကျယ်မိလို့ အချစ်ကိုဘောင်ခပ်မထား
ငါဝန်ခံဖြောင့်ချက်လေးပေး ငါတို့ဝေးများဝေးရင် ငါ့ရင်ကွဲရမယ်
သီချင်းကို နားထောင်လို့ကောင်းတုန်း အသံတွေဝင်လာသည်၊ နစ်ဝင်နေသော ဖြူဖြူကျော်သိန်း အသံကတော့ ကျမအနားကထွက်ပြေးသွားပြီ၊ စကြပြန်ပြီထင်တယ်ဟု စိတ်ထဲမှာပြောရင်း
ဒီတစ်ခါ ဘာများဖြစ်ကြတာပါလိမ့် ဆိုပြီး မိန်းမတို့သဘာဝ နားစွင့်လိုက်မိသည်၊
‘ကျမရှင့်ကို အစကပြောပြီးသား သီတင်းကျွတ် အဖေနှင့်အမေကို ကန်တော့မယ်လို့
မိဘကိုငွေလေး တစ်ရာလောက်ပိုပို့တာ အပြောခံရတယ်လို့၊ အရပ်ကသိရင်မကောင်းဘူး၊’
‘ငါပြောတာက ငါကိုအသိပေးဘို့ကောင်းတယ် မင်းကိုဆူနေတာမဟုတ်ဘူး၊’
‘ရှင်ပြောတဲ့ပုံစံက ဆူတာနဲ့ ဘာထူးသေးလဲ၊ ငွေဈေးတွေကကျနေလို့ ကျမလေးသိန်းအတိလုပ်လိုက်တာ၊’
‘နောက်လ ငွေတွေအများကြီးကုန်မှာ မင်းသိရက်သားနဲ့၊’
‘အို ဒါကရှင့်ကိစ္စ အိမ်အတွက်ငွေရှာရမှာ၊ ကျမက အမေတို့ကိုပေးချင်လို့ ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်း ကျွေးချင်ဆင်ချင်လို့ မအားတဲ့ကြားက အလုပ်ထွက်ထွက်လုပ်နေတာ၊’
‘ဒါစင်္ကာပူကွ ဒီနေ့ ပိုက်ဆံမရှိရင် နောက်နေ့ဘာဖြစ်သွားမလဲ မင်းသိလား၊’
‘ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ နေနေသေးသလဲ၊ ပြန်ရမှာသိပ်ကြောက်မနေနဲ့၊’
ကလေးတွေပဲရှင် ဘယ်မှာပဲနေနေ သူဟာနဲ့သူ လူဖြစ်လာကြမှာပဲ
တကယ်တည်းရှင် စင်္ကာပူမှာနေမှ လူဖြစ်တယ်ထင်နေကြတယ်၊’
‘ကျမကလည်း စိတ်ကူးယဉ် နေတာမဟုတ်ပါဘူး၊’
‘ပြန်ဆိုရင် ကျမက ဖုတ်ဖက်ခါကာ ပြန်လိုက်ယုံပဲ ရှင်သာဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့နေခဲ့၊’
‘တောက် အိမ်မှာလည်းဆူပူ၊ ရုံးမှာလည်းဆူပူ၊’ “ဝုန်း”
တံခါးပိတ်သံနှင့်အတူ အသံတို့ ခဏတိတ်ဆိတ်သွားသည်။
ဒီလို နင်ပဲငဆ အသံတွေ ကျမကြားကြားနေရတာ ငါးနှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်၊ ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ ကျမအခန်းငှါးနေသော အိမ်ပိုင်ရှင် အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့ဖြစ်သည်။
ကျမ စင်္ကာပူစရောက်ကာစ အလုပ်ရှာတုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းအခန်းတွင်ကပ်နေသည်၊ အလုပ်ရတော့ အလုပ်နဲ့နီးရာ ရှာနေရင်း ဒီအိမ်ကိုရောက်ခဲ့သည်၊ အခန်းတစ်ခုလုံးကို အပြီးအစီး ၅၅၀ နှင့်ငှါးထားသည်၊ အိမ်ဈေးတက်တက်ကျကျ အိမ်လခမပြောင်း၊ နေလာတာလည်း ငါးနှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်၊ အစ်မကြီးတို့ မိသားစုလေးယောက် နှင့်ကျမတစ်အိမ်လုံးတွင် လူငါးယောက်နေထိုင်သည်၊ အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသော လေးခန်းအိမ်ကလေးဖြစ်သည်၊ အစ်မကြီးတို့တွင် သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက်ရှိသည်၊ သမီးကအကြီး P5 ခေါ် မူလတန်း ငါးတန်းသို့ရောက်နေပြီ၊ သားလေးမှာခုမှ P1 တစ်တန်းစတက်သည်၊ အစ်မကြီးတို့ကတစ်ခန်း၊ ကလေးနှစ်ယောက်က တစ်ခန်းနှင့် ကျမကတစ်ခန်း၊ ကျမကို မာစတာအိပ်ခန်းပေးထားသည်၊ အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့ခဏခဏ ရန်ဖြစ် စကားများကြသည်၊ ပြင်းထန်သည်နေရက်များမှာတော့ ကျမ စတေးရှောင်ထွက်သွားရသည်။
အချိန်လေးရတိုင်း ကျမရဲ့ လက်တော့လေးကိုဖွင့် အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ သီချင်းနားထောင် ဒီလိုနဲ့ အနားယူ အချိန်ကုန်လေ့ရှိသည်၊ နားချိန်ဆိုလည်း တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်မှာသာ သိသိသာသာရှိသည်၊ ညနေပိုင်း အလုပ်ပြန်လာချိန်နဲ့ စနေနေ့တွေ အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက် ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ် ဘယ်လိုကုန်ဆုံးသွားမှန်းမသိတော့၊ တစ်လတွင် တစ်ခါလောက်တော့ ပင်နီဆူလားဘက် ဈေးဝယ်ဖြစ်သည်၊ ဟိုဟာလေးဖတ်ချင်၊ ဒီဟာလေးစားချင်နဲ့ တစ်ခါတစ်လေလည်း တစ်ယောက်ထဲ တစ်ခါတစ်လေလည်း အားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ စင်္ကာပူမှာ အားတဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတာရှားသည်၊ အားအားယားယား လျှောက်သွားနေသူတွေကိုတော့ အားကျမိသည်၊ သူငယ်ချင်းတွေဆုံမိကြရင်လည်း ဟဲ့နင်တစ်ယောက်ထဲပဲလား၊ အပျိုကြီး အချိန်လေးဘာလေးပေးဦး၊ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတော့ ၃၅ ကျော်ရင် အပျိုဟိုင်းပြီနော်၊ ကျမလည်းဒီလ ၃၅ ပြည့်သည်၊ နောက်လဆို ဆီနီယာ အပျိုကြီးဖြစ်ပြီပေါ့၊ တစ်ခါတစ်လေလည်း စဉ်းစားမိသည် ဘယ်လိုအပျိုကြီးဖြစ်သွားသလဲ၊ နှစ်ယောက်လောက်လွဲခဲ့ဘူးတာနဲ့၊ လင်စိတ်သားစိတ်ကုန်နေတာလား၊ ဟုတ်သေးပါဘူး၊ တံခါးကို အပြည့်ဖွင့်ထားပါလျှက်နဲ့ ဖူးစာရေးနတ် ကျော်ကျော်သွားလေသလား၊ ဒီကြားထဲ အတူတူချင်း ငါတို့ စင်္ကာပူထွက်မလာရင် အပျိုကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ ဆိုတဲ့သူကရှိသေးသည်၊ ကျမပြောလိုက်ပါတယ် ငါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပျိုကြီးလို့ မခံယူဘူး လွတ်လပ်တဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ ခံယူတယ်၊ စိတ်တူကိုယ်တူ လက်တွဲဖေါ်ကိုရှာနေတာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက် ၃၅နှစ်အထက် လူပျိုလူလွတ်တွေအများကြီးပဲ၊ စင်္ကာပူကလည်း လူလွတ် single အချိုး အများဆုံး နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အစိုးရက လူလွတ် single တွေ အိမ်ဝယ်လို့ရအောင် လုပ်ထားပေးသည်၊ အဓိကကတော့ ကျမကိုယ်ကျမ လူလွတ်တစ်ယောက်လို့ ပြောချင်တာပါ။
အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့အရင်က ရန်ဖြစ်ရင်တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ရန်ဖြစ်ကြသည်၊ နောက်ပိုင်း ကျမနဲ့ရင်းနှီးလာလို့လား၊ ပိုပေါက်ကွဲလာကြတာလား မသိပါ၊ အသံတွေထွက်လာကြသည်၊ အစ်မကြီးသည် မိန်းမချင်းမို့ ကျမနှင့်ပိုရင်းနှီးလာသည်၊ စကားပြောဖေါ်ဖြစ်လာသည်၊ လင်ယူမမှားစေဘို့ ကျမကိုအမြဲပြောသည်၊ ဒါပေမဲ့ ကျမက အစ်မကြီး အစ်ကိုကြီးကိုယူမိတာမှားလားလို့ ကျမပြန်မမေးဖြစ်ခဲ့ပါ။
အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ်ခေါ် RIT မှ ကျောင်းပြီးသူများဖြစ်ကြပြီး၊ ကျမထက် ၁၀နှစ်လောက်ကြီးကြသည်၊ အစ်မကြီးသည် ရန်ကုန်တွင် အစိုးရအလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း ဒီမှာအလုပ်မလုပ် အိမ်အလုပ်သာလုပ်သည်၊ တစ်ခါတစ်လေ အချိန်ပိုင်း အရောင်းစာရေးဝင်လုပ်သည်၊ အိမ်ယူ autocad ဆွဲသည်၊ သမီးအကြီးသည် မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး သားငယ်လေးသည် စင်္ကာပူတွင်မွေးသည်၊ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ထဲဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုတစ်စုလုံးကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ကလေးတွေကလည်း အားနေရသည်မရှိ၊ အိမ်စာ ကျူရှင် ဟိုသင်တန်း ဒီသင်တန်းနဲ့ ကလေးတွေဘဝ သနားဘို့ကောင်းသည်၊ ချို့ယွင်းနေသော စင်္ကာပူပညာရေးစနစ်ဒဏ်ကို ခံရသည်၊ ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲပြစ်နေသော ပညာရေး စနစ်သစ်ကို အငယ်ကောင်လေး မှီကောင်းမှီလိမ့်မည်၊ စားမေးပွဲအခြေခံ၊ အဆင့်(grade) အခြေခံ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်၍ ဗဟုသုတနည်းပြီး လူမှုရေးချို့ယွင်းကာ Talent များထွက်ပေါ်မှုနည်းလာကြောင်းဆိုသည်၊ ၇၅% စနစ်မှTalent အခြေခံ ပညာရေးစနစ်သို့ ပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးကထုတ်ဖေါ်ပြောခဲ့သည်၊ Foreign Talent ကို အားကိုးနေမှုကိုလျှော့ချမည်ဆိုသည်၊ စင်္ကာပူသည် ခေတ်မှီအဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်ရှိသော်လည်း Talent ပေါ်ထွက်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံထက်တောင်နိမ့်ကျသည်ဟု မြန်မာလေ့လာသူ အမေရိကန် တစ်ယောက်ကဆိုသည်။
စင်္ကာပူရဲ့ ပညာရေးစနစ် လူမှုရေးစနစ်အောက်မှာ လုံးလည်လိုက်နေသော အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့ မိသားစုအကြောင်းပြောပြဖြစ်သောအခါ သူငယ်ချင်းများက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရင် သနားဦးလို့ဆိုသည်။
ဒီအိမ်တွင် ကလေးမွေးနေ့ပွဲလုပ်သောအခါ၊ အလှူလုပ်သောအခါ မိသားစုများဆုံဖြစ်ကြသည်၊ ထိုအခါ သူတို့၏ ရင်ဖွင်သံများ ကြွားလုံးများသည် ကျမအတွက်မြှားနတ်မောင်ကို ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်မိသည်၊
စိတ်ဝင်စားစရာတွေကတော့ အစုံပင်၊ ပထမဦးဆုံး မှန်မင်းသမီးလေးအကြောင်းပြောပြမည်။
အဖေရော အမေရော အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ကြသည်၊ သမီးလေးတစ်ယောက်ထဲရှိသည် တော်တော်ချောသည်၊ သမီးလေးကို ထွန်းပေါက်စေချင်သည်၊ အချိန်ဇယားများဖြင့် နေထိုင်စေသည် စာတွေကို အမြဲတန်း A ရအောင် အထပ်ထပ်ကျက်စေသည်၊ သမီးလေး P4 လေးတန်းရောက်သောနှစ်တွင် လင်မယားနှစ်ယောက် သတိထားမိသည်မှာ သမီးလေးသည် အမြဲတန်းလိုလိုမှန်ကြည့်နေတတ်သည်၊ ကွန်ပါဘူးတွင်မှန်ပါသည် စားကြည့်စားပွဲတွင်မှန်ထားထားသည် ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးတွင်မှန်ပါသည် ထမင်းစားရင်တောင်မှ မှန်ကြည့်စားသည့် မှန်မင်းသမီးလေးဖြစ်နေသည်၊ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး ၆တန်းရောက်လာသည် မူလတန်းနောက်ဆုံးနှစ်မို့ အရေးကြီးသည့်အတွက် မှန်ကိစ္စနဲ့ အမေနှင့်သမီးစကားများသည် တစ်ခါမှ ခံမပြောဘူးသောသမီးခံပြောသည် နောက်ဆုံး အမေက မှန်ကြည့်ချိန်ကို ဇယားထဲထည့်ပေးရသည်၊ အဘောတူညီမှုအရ သမီးလေးမှန်တွေမထားတော့၊ ဒါပေမဲ့ သမီးလေး ကွန်ပြူတာကို ပိတ်ထားတတ်သည်၊ Mobile ဖုန်းကိုအကြီးစားဝယ်ခိုင်းသည်၊ မှန်မကြည့်ပါ ပိတ်ထားသော ကွန်ပြူတာ screen ကိုကြည့်သည်၊ Mobile ဖုန်း screen ကိုကြည့်သည်၊ ချောမောလှပသော သူ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်နေတတ်သည်၊ မှန်ကြည့်ပြီးသမီးဖြေလို့ A ရတာလို့ဆိုသည်၊ စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒီမှန်မင်းသမီးလေး တစ်နေ့ စင်္ကာပူရဲ့ Top Model ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရ၊ စင်္ကာပူရဲ့ ကျန်ကျိယိ ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရ၊ နာမည်ကျော် အလှပြင်ဆရာမ ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရ၊ ဖြစ်လာရင်တော့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပေဦးတော့မည်။
နောက်ထပ် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်သံက၊ သမီးအငယ်ဆုံးလေးသည် ခုမှ P2 ခေါ် ဒုတိယတန်းရောက်သည်၊ သမီးလေးကို အင်္ကျီအဝတ်အစား ဝယ်ပေးလျှင် သူကိုယ်တိုင်ရွေးသည်၊ အဖေအမေ ရွေးပေးလို့မရ၊ မအေကမကြိုက်သော်လည်း အဖေကအလိုလိုက်သည်၊ အမေကအဖေကို ဘယ်လိုဆင်ထားတာလည်း၊ အရောင်တွေကို ဘယ်လိုစပ်ရတာ၊ အမေရွေးတာတွေက ရွာဆန်လိုက်တာ စသဖြင့်ဝေဖန်တတ်သည်၊ တစ်လကိုအဝတ်နှစ်စုံ အသစ်အမြဲဝယ်ပေးရသည်၊ ဒီသမီးလေးအသက် အငယ်ဆုံး ဒီဇိုင်းနာဖြစ်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလို့ရမလဲ၊ ဖြစ်လာရင်တော့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဦးတော့မည်။
သားတစ်ယောက် အကြောင်းညည်းသူတစ်ယောက်ကတော့၊ သားရုပ်ရည်ကအဖေနှင့် တော်တော်ဆင်၍ အမေကအချစ်ပိုသည်၊ အမေနဲ့အမြဲပူးပူးကပ်ကပ်နေသည်၊ ကျမသားလေးကတော့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့နိုင်လိုက်တာဟု အမေကကြွားသေးသည်၊ သားလေးသည် ထမင်းချက် ဟင်းချက်ဝါသနာပါသည်တဲ့၊ ၅ တန်းပဲရှိသေးသည် ထမင်းကြော်တတ်နေပြီ၊ နန်းကြီးသုပ်တတ်နေပြီ၊ breakfast ဆိုသူပဲပြင်သည်၊ နွဲ့ နေလိုက်ပုံက ကိုရင်ဝတ်ပေးတုန်းက ဆရာတော်ဘုရား ဟုခေါ်လိုက်ပုံက ဘုန်းကြီးတောင် ကြက်သီးထသွားတယ်ဟုဆိုသည်၊ အဖေလုပ်တဲ့သူ အဲဒီ့အထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်တော့၊ ကလေးစာညံ့၍၎င်း ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ နိုင်၍၎င်း အဖေနှင့်အမေတို့ ဒီသားအတွက် ခဏခဏ စကားများကြသည်ဆို၏၊ ဒီကလေးကြီးလာလျှင် Top chef ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရ၊ ဖြစ်လာရင်တော့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပေဦးတော့မည်။
နောက်တစ်ယောက်အဖြစ်ကတော့ ကျမအသည်းယားမိသည်၊ အဲဒီအစ်မကြီးကပြောသာပြောနေသည် မျက်နှာကမကောင်း၊ သားလေးသည် P4 လေးတန်းရောက်နေပြီ၊ ကျောင်းကခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားရာ ဆရာမက ကလေး၏ထူးဆန်းဖွယ် အဖြစ်ကိုသိရ၍ ခေါ်ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်၊ သားလေးသည် စာဖတ်သောအခါတွင်၎င်း စာကျက်သောအခါတွင်၎င်း လက်တစ်ဘက်က ခေါင်းပေါ်ရှိ ဆံပင်ကို တစ်ချောင်းချင်း ဆွဲနုတ်လေ့ရှိသည်၊ နောက်ဆုံး ထိပ်တွင်အကွက်ကြီးဖြစ်နေသည်၊ မိဘနှင့် ဆရာမတွေတိုင်ပင်ကာ ကတုံးတုံးပေးလိုက်သည်၊ ဆံပင်မရှိ၍ မဆွဲနုတ်သော်လည်း၊ အိမ်တွင်ခေါင်းပေါ် ထိုင်ခုံတင်ကာ စာကြည့်စာဖတ်သည်၊ ကျောင်းတွင် စာအုပ်အထူကြီး ခေါင်းပေါ်တင်ကာနေသည်၊ ဆရာမကပြောသောအခါ နားရွတ်တစ်ဘက်ကို ဆွဲဆွဲနေတတ်သည်ဟုဆိုသည်၊ အဖေရော အမေပါ စိတ်ညစ်နေကြသည်၊ ဒီကလေးကြီးလာလျှင် အိုင်စတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရ၊ ဖြစ်လာရင်တော့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပေဦးတော့မည်။
အိမ်က အစ်မကြီးသမီးလေးအကြောင်း ပြောရဦးမယ်၊ တစ်နေ့ကျမကို အန်တီမ အန်တီမ What is the meaning of boyfriend? What does boyfriend mean? အပျိုကြီးမဟုတ်လို့ ခံယူထားတဲ့ကျမ ဘယ်လိုဖြေရမလဲ၊ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက When my breast will become bigger like you? မေးလာသည်၊
Ask your mother လို့ပြန်ဖြေလို့တော့မဖြစ်၊ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး အပျိုကြီးလို့ပဲခေါ်ခေါ် single လို့ပဲခေါ်ခေါ်၊ တကိုယ်တည်းက ကျမအတွက်အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပါလား။
ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေပေမဲ့ တိတ်ဆိတ်လွန်းသည်၊ မနေ့က ကလေးတွေ မွေးနေ့ပွဲသွားမည်ဆို၍ဖြစ်မည်၊ ဒီနေ့တော့ ဘယ်ကိုမှာမထွက် အခန်းထဲမှာပဲ နားဘို့ကျမစိတ်ကူးလိုက်သည်၊ အေးအေးဆေးဆေးလေး သီချင်းနားထောင် ပြီးရင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက်ကြည့်မည်ပေါ့၊ ဘယ်သီချင်းနားထောင်ရမလဲ ကျမစီဒီတွေကိုရှာနေတုန်း။
နောက်တော့ ကာရာအိုကေ လိုက်ဆိုကြသံထွက်လာသည်၊
အစ်ကိုကြီးနှင့်အစ်မကြီးတို့ဖြစ်သည်၊ ကလေးတွေမရှိတုန်းမို့လည်းဖြစ်မည်၊ ကျမကိုလည်း အပြင်ထွက်သွားပြီထင်နေမည်၊
အေးအတူ ပူအမျှ တို့ဘဝလေးမှာ၊
ခဏ ခဏ ကြုံမှာပဲမို့
အေးအတူ ပူအမျှ တို့ဘဝလေးရယ်
အေးအတူ ပူအမျှ ပေါ့ကွယ်…
ရင်မှာခိုဝင် နားစက်ရင်းနဲ့ ချွေးသိပ်ဖြေပါဦး
သူတို့ ပျော်ရွှင်စွာ သီချင်းဆိုနေကြသံကို နားထောင်ရင်း
တကိုယ်တည်းနေသော သူငယ်ချင်းမမ၏ ပြောပြချက်များကို
Posted by sosegado at 11/05/2010 07:30:00 PM
ကျွန်တော် အစ်ကိုကြီးနဲ့ ကျွန်တော့် မရီးလည်း အေးအတူ ပူအမျှ ကို အတော်ကြိုက်ကြတယ်ဗျ။ သူတို့ ခဏခဏ ဆိုတာ ကြားဖူးတယ်။ စိန်တုံးတွေလား မြွေမျက်လုံး တွေလားတော့ မသိပါဘူးဗျာ။ :)
စင်္ကာပူ ရန်ကုန်တိုက်နယ် တစ်ခုစာလောက်ပဲ
ရှိမယ်ထင်တယ်နော်..၊ ဒါပေမဲ့တကမ္ဘာလုံးရဲ့ 
ဥဏှောက်ယိုစီးခြင်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံလေးဆိုတော့ လဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေက ဘယ်တော့ မှ အထောမသတ်
အဆုံးမရှိ ၊ အနေကျပ်တဲ့ မြို့ တော်လေးဆိုတော့ လဲ
နွေးထွေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို တော်တော်ရှာယူနေရမယ်လို့ 
ဘာတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း တစ်ကိုယ်တည်းနေရခြင်းရဲ့ လွတ်လပ်မှုက ပိုကောင်းတာနော.. တို့ကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေကိုဘဲ မဲပေးသွားတယ်..း))
သားသမီးတွေအကြောင်း မိဘများရေးဖွဲ့ပုံကို တော်တော်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ သူတို့တွေ တချိန်နာမည်ကြီးရင်တော့ ဒီပိုစ်လေးကို ပြဖို့သင့်တယ် :D
ကျွန်မရဲ့သူ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လာရေးသွားပါတယ် :))
အေးအတူ ပူအမျှ ဒို့ဘ၀လေးပေါ့ ... :P
Forgiving ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို For Give ဆိုပြီး ခွဲပြထားတာ မနိုင်းဆီမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ တော်တော် သဘောကျပါတယ်။ ဘဝ ဆိုတာလည်း ဒီလိုပဲပေါ့။ ခွင့်လွှတ်တယ် ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပေးကမ်းတာပဲ မဟုတ်လား။ သူ့ရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း အားလုံးကို ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုခြင်း အားလုံးကို အတူတူ မျှဝေ ခံစားချင်တယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပြည့်စုံ ပြည့်စုံ တစ်ယောက်တည်းဆို ဘဝဟာ ခြောက်သွေ့ ရှတတယ်။
မိဘတွေရော ကလေးတွေပါ ပရက်ရှာခံရတာကိုး
လောလောဆယ်တော့ ကျနော်လည်း တစ်ယောက်ထဲပါပဲ။
မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဖြစ်နေဘီ လက်တို့ပြီးတော့ကို ပြောပြီဦးမယ်
မြန်မာ အမေတွေများ ဒီနိုင်ငံရောက်လာပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံက အကျင့်ကမပျောက်ဘူး အမေ တွေတွေ့လိုက်ရင် သူတို့သမီးက ဘယ်လို သားက ဘယ်လိုနဲ့ ကြွားလုံးထုတ်ပြီ နားကြားကို ပြင်းကတ်တယ် နိုင်ငံခြားအမေတွေကတော့ အေးဆေးပဲ သူတို့အမေချင်းတွေ့လဲ သားသမီးအကြောင်းမပြောဘူး စိတ်လဲမဝင်စားဘူး အေးတာပဲ ဒါလဲတမျိုးကောင်းတယ်
နောက်တခု ရှိသေးတယ် “ အိမ်က သမီးကလေ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောတာ မြန်မာလို မတတ်ဘူးရယ် ” ဆိုတာက ရှိသေးတယ် နားရင်းချည်း ဖြတ်ရိုက်ပလိုက်ချင်တယ် အဲဒါ ကိုယ်အသုံးမကျတာကို လူကြားထဲ ထုတ်ကြွားတာလေ အကောင်းများ မှတ်နေလားမသိဘူး ကိုယ့်ဘာသာစကား သင်ပေးရမှာပေါ့ ဘာလဲ “ အိမ်က သားကလေ မြန်မာစကား နဲနဲပါးပါး ပြောတတ်တယ် ” ဆိုတာကလဲ ရှိသေးတယ်
သိပ်အထင်ကြီးနေကြတယ် ဒါကြောင့် မြန်မာအမေ တွေ ရှိတဲ့နေရာ သွားလဲမသွားချင်ဘူး ကြွားလုံးတွေပဲ ကြားနေရလို့
မချောပြောသလိုပဲဟေ့ ကိုယ်တို့ကတော့ တကိုယ်တည်း သမားတွေကို မဲ ပေးတယ်ဟေ့ ခစ်ခစ်
ကျနော်တော့ ဒီပိုစ့် လေးကို ကြိုက်တယ် မိဘ လုပ်တဲ့ သူတွေအများ ကြီးစဉ်းစားစရာတွေပါတယ် ကျနော် တော့ ပြုစုပျိုးထောင်တာကို ဝါသနာပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ သံယောဇဉ်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး
ဝက်ဝံလေး ပြောတာလည်းကြိုက်တယ် အမှန်အတိုင်းဘဲ
ကျေးဇူး ဘဲဗျာ စာများများရေးပေးပါ
ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နိုင်ပြီး၊ မြန်မာစကား မြန်မာစာ နာလည်းသော
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မိသားစုအတွက်တော့ လှုပ်ရှားရမှာပဲ၊
ဒီဘက်မှာတော့ ကလေးတွေ ကျုရှင်မလိုဘူး၊
ဒီကိုရောက်လာပြီး ဒီမှာပဲ ပညာသင်ယူကြတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးလေးတွေ အတွက်
ဆိုးကျိုးနဲ့ ကောင်းကျိုးတွဲနေတော့တယ်လို့ မြင်မိတယ်။
တစ်ယောက်တည်း နေရတာကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ
ပေါ့လေနော်...ဒါပေမဲ့ အဲဒါလည်း အကောင်းနဲ့ အဆိုး
Link လေးယူသွားပါတယ်..Brother :)
ဒါပေမယ့်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေ အခြေအနေအချိန်အခါတွေကကို ဒီလိုဖြစ်လာတာပဲ....
တစ်ကိုယ်တည်းက ကောင်းသလား၊ အဖော်နဲ့ကကောင်းသလားဆိုတာတော့ မဝေခွဲတတ်သေးဘူး....ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့....း)
များများတွေးတော့လည်း ဘယ်မှ မရောက်ဖူးဘူးပေါ့
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လုပ်တော့လည်း ကြုံလာသလို ရုန်းကန် ရတာပဲ။
ဘယ်လိုနေနေ ဘယ်လိုရွေးရွေး ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်း စိတ်ချမ်းသာဖို့ အဓိကပဲ။
ကလေးရဲ့အမူအကျင့်လေးတွေက မိဘတွေရဲ့ အပြုအမူပေါ်သက်ရောက်တတ်တော့ ပို့စ်ထဲကသားလေးရဲ့ အပြုအမူတွေကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အေးအတူပူအမျှကို အတူတကွ အမြဲဆိုနိုင်သူများဖြစ်စေချင်တာပဲ။
နားလည်မှု၊ စာနာမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားလေးကတော့ ရင့်သန်နေဖို့လိုတယ်။
( ကွန်နက်၇ျင်တွေမကောင်းသေးလို့ အပြင်ဆိုင်ကနေ စာကြွေးတွေလာရှင်းသွားပါတယ် ကိုစိုစီရေ)
ကိုတည်ငြိမ်အေးရေ မရောက်တာ ကြာသွားတယ်ရှင်၊ ဒါလေး တန်းဖတ်လိုက်ရတာ သဘောကျလိုက်တာ၊ ကလေးမရှိတဲ့ ကျမတို့အတွက် အပူတခု ငြိမ်းသလိုလို....။ ကလေးတွေရဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိဘတွေရဲ့ ပျိုးထောင်မှု ဒါတွေလည်း အဓိက နေရာက ပါဝင်နေတာလေ...။
စဉ်းစားရင်း ခေါင်းက ဆံပင်တွေ ဆွဲနှုတ်တဲ့ ကလေးတယောက်တော့ အလှူတခုသွားတုန်းက တွေ့ခဲ့တယ်... ကလေးက ချစ်စရာလေး ချောချောလေးကို ခေါင်းက အကွက်လိုက်ကြီး ပြောင်နေတာ။ ပူးတေလဲ မနေနိုင်တာနဲ့ သားသား ခေါင်းက ဘာဖြစ်တာလဲလို့ မေးမိတယ်... ပူးတေက အနာတွေဘာတွေများ ပေါက်ထားလို့ ဆံပင် မပေါက်တော့တာလားလို့ ကူညီလို့ရရင် ကူညီချင်လို့ မေးမိပါတယ်... ပူးတေမြန်မာလိုပြောတာတော့ သူ နားလည်တယ် ထင်တယ်.... သူပြန်ဖြေတာကတော့ It's my bad habbit. တဲ့ ဒါနဲ့ ပူးတေလဲ သားသားရဲ့ bad habbit က ဘာလဲလို့ မြန်မာလို ပြန်မေးတော့ မဖြေတော့ဘူး.... သူ့ညီမလေးထင်တယ်... ကလေးမလေး သေးသေးလေးက မြန်မာလို သေချာလာပြန်ပြောပြတာ...သူက ကျောင်းမှာရော အိမ်မှာရော စဉ်းစားစရာ တခုခုရှိရင် ဆံပင်တွေကို ဆွဲနှုတ်ပြီးမှ စဉ်းစားလို့ရပါသတဲ့လေ..ကြားရတာ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ အလှူမှာ ကြားတဲ့လူအားလုံး စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးတွေနဲ့...ကလေး မိဘတွေကို ပူးတေက စမေးမိတဲ့ လူဆိုတော့ အားနာလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပဲ။ မထူးဆန်းသလိုပဲ။ ကောင်လေးကတော့ နဲနဲရှက်တဲ့ပုံစံ ပေါက်ပြီး Now, no more already. လို့ ဝင်ပြောရှာတယ်.... ပူးတေလဲ ကောင်းတယ်နော် သားသား ... နောက်မလုပ်တော့နဲ့လို့ ပြောခဲ့ရသေးတယ်...
တကယ်တမ်းပြောရရင် ကလေးတွေကို ဒီကကောင်းတဲ့ ဟာလေးတွေရစေချင်တယ်... ပညာရေး အဆင့်တန်းမြင့်တာ.. အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတာတွေပေါ့... ကျန်တဲ့ အချက်တွေ ဥပမာ breast အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတာ... boyfriend girlfriend အကြောင်းကို P3 P4 လောက်နဲ့ စိတ်ဝင်စားနေကြတာတွေ လူကြီး မိဘကို ရိုသေရကောင်းမှန်း မသိတာတွေကို မရစေချင်ဘူး... ပူးတေတောင် ကလေးမွေးရင် မြန်မာပြည်မှာပဲ ပြန်မွေးမလားစဉ်းစားထားတယ်.... သူတို့ အမှန်အမှားကို ခွဲခြားနားလည်နိုင်လာမယ့် university လောက်ကျမှ သင့်တော်မယ့် တနေရာကို သူတို့ဆန္ဒနဲ့ ရွေးချယ်စေမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်...
အသိအစ်မတယောက်ရဲ့သားလေးဆို ဒီရောက်တော့ P2 သားလေးတယောက်ထဲ ဆိုတော့ ကလေးလိုလေးပဲထားတာ... မေမေ သားကို ဘယ်ကနေမွေးတာလဲဆို ရန်ကုန်မှာနေထဲက အဲဒီအစ်မက သူ့သားကို ချက်ကနေမွေးတာပေါ့လို့ ပြောတာပေါ့.... သူလဲ ဒီလာပြီး ကျောင်းတက်တာ ၆လ မပြည့်သေးဘူး... မေမေ ညာတယ် သားသူငယ်ချင်းတွေ ပြလို့ သားကြည့်ပြီးပြီ... သားတို့ကို ချက်ကနေမွေးတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့... သူတို့က youtube ကနေ ကြည့်ကြတာတဲ့... သိထားတာတော့ ကောင်းပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲဒီအစ်မက ကလေးငယ်သေးတော့ မသိသင့်သေးဘူး... အရွယ်ရောက်လာရင် အချိန်တန်ရင် သိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ ကလေးပဲဆိုတော့ ချက်ကနေမွေးတယ်ပြောထားမတာ သူကျောင်းမှ ဝိုင်းရီခံရလို့တဲ့ လေ
ခင်မင်စွာနဲ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ မန့်တာ ရှည်သွားတယ် ကိုဆိုဆီရေ